Chiitiko Ratidza Zvigadzirwa Fekitori | China Chiitiko Ratidza Zvigadzirwa Vagadziri uye Vatengesi
10 × 10 Yakazara Ruvara Rakadhindwa Ad ...
Round kutambanudza tafura topper isarudzo huru yekuita yako yechiitiko tafura iratidzike yakapinza uye yakashongedzwa. Zvakare, inogona kushandiswa kuchengetedza tafura yako yepamusoro kubva pakupfeka kwemazuva ese, kunyanya kufamba uchidzoka kuenda kumberi kune zviitiko uye zvekuratidzira.
Inofanirwa nezviitiko zvakasiyana zvekushambadzira, zvekushambadzira zviratidziro, uye zvitsva zvigadzirwa zvigadzirwa, iyo tsika tafura mumhanyi anogona kuita yakadzika uye yakasimba pfungwa kune vanhu vari "vari kuenda". Printyour marogo uye masirogani patafura anomhanya, yako yakakosha meseji inosvika kune vanhu mukati memaminitsi.
Iyo yakasarudzika yakafukidzwa tafura yekuvharira ndeimwe yeanonyanyo shandiswa ekushambadzira maturusi pamabhizimusi ekuratidzira, kuratidzira kana kuratidzira. Tora kucherechedzwa netsika yakagadzirirwa tafura yemabutiro! Iwe unogona kuratidzira kuratidzwa kwako nefurafura tafura yekuvhara kune yakasimba yekuona maitiro ayo anozokanganisa vangangove vatengi uye kuvanakidza.
Chinoshandurwa Tafura Inovhara
Iyo inoshandurwa kana inogadziridzwa tafura yekuvhara yakakwana kune dzakasiyana zviitiko zvekushambadzira, kuratidzira, zvekutengeserana zvinoratidza uye zvimwe. Uine tafura inoshanduka inoshanduka inovhara, iwe unowana maviri akasiyana ekushambadzira mhinduro, sezvo tafura yedu inokanda haigone kungoshandurwa kubva ku8ft kukanda kuenda ku6ft kukanda asiwo kubva ku8ft kukanda kuenda ku6ft yakagadzirirwa kavha.
Mhando yetafura inokanda kana chifukidziro chetafura ndeimwe yemhando dzepasirose mumatafura edu ekuunganidzwa ayo anowanzo shandiswa pamitambo yekutengesa, kuratidzira kana kuratidzira. Dhizaini dhizaini uye yakachena yekucheka inoita kuti ifarirwe nevazhinji vanoratidza-vanoenda. Kana iwe uchida kuratidza yako brand kana logo, 3-padivi tsika yakadhindwa machira etafura zvirokwazvo ndiyo sarudzo yako yakanaka.
Tende yedenga, inonziwo marquee uye gazebo, chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya. Inoratidzira hombe yekudhinda saizi uye yakajairika graphic, kushambadzira matende canopies ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekukuita kuti ubude pachena kubva kune vanhu vazhinji, zvisinei kuti zvinoshandiswa kune zviitiko zvemukati uye zviitiko zvekunze, senge zvekuratidzira, mapato, zviitiko zvemitambo kana zviitiko zvekunze zvekunze.